आफ्नै गीत खोज्दै चर्चित लोक गायक राजु परियार « Everestleaks – Nepal's Popular Digital NewsPaper
काठमाडौँ, २७ माघ । धोका दिनेलाई के भनौँ र खोई तिमी हाँस भो मै बाँचौला रोइ । हङकङ मलाया मायाले मै टाढा भएनी चिठी चलाए । लालुपाते नुग्यो भुइँतिर कि लाउm माया मै तिर कि लाउ उहीतिर, निर नलाउँ दुईतिर ।
यी र यस्तै असङ्ख्य लोकगीत गाएर नेपाली लोकगीत पारखी माझ ख्याति कमाएका राजु परियार अचेल भने साङ्गीतिक संसारमा त्यति सारो देखिदैनन् । विसं २०३७ असार १५ गते लमजुङको गाउँ सहर गाविस–९ मा जन्मेका राजु सात वर्षको उमेरदेखि नै जानेर नजानेर गीत गाउन थालेको बताउँछन्।
उनको गीतले धेरैको मन र मुटु छोएको छ । धेरै प्रशंसक कमाएको पनि छ । धेरैले उनको स्वर र गीत मन पनि पराएका छन् । तर उनी आफैँलाई भने सुनपानीले छर्क मायालु, रुमाल धोको छु, वनमा काँडा छ, माहुरी फूलमाथि, दरौँ सिरुबारी, जानेलाई जानदेउ मायाँ, मिर्मिरेको घाम, हङकङ मलाया, धोका दिनेलाई के भनौँ र खोई र लमजुङ जाने दाइ जस्ता बढी मनपर्छ ।
झन्डै दुई दशकको गायन क्रियाशीलताले उनलाई केवल प्रशंसक मात्र हैन पुरस्कार पनि दिलाएको छ । पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको हातबाट प्रवल जनसेवा श्री चौँथो विभूषण, भारतको पुनाबाट प्राप्त डा. अम्बेडकर पुरस्कार र नातिकाजी युवा प्रतिभासहित रेडियो, एफएम स्वदेश र विदेशका विभिन्न सङ्घ संस्थामार्फत थुप्रै सम्मान र पुरस्कार पाइसकेका छन् ।
परियार पहिले र अहिलेको गीतमा फरक पाउँछन्। उनी भन्छन्, “पहिले मौलिक खालको शब्द, गीत र शैली थियो तर अहिले गायनको पूरै ढर्रा परिवर्तन भएका छन्, सायद सर्जक टाठाबाठा भएर हो कि ।”
उनको गीत नेपालकै हिमाल, पहाड र तराईमा मात्र गुञ्जिएको छैन । भारत, चीन, बेलायत, जापान, इजरायल, साउदी अरब, दुवई, कतार, बहराइन, मलेसिया, सिङ्गापुर, हङकङ, कोरिया र युरोपेली मुलुुकमा पुगेर गीत गाइसकेका छन् ।
नयाँ पुस्तालाई मेहनत, परिश्रम र गीतसङ्गीतको मर्मअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने गरी यो क्षेत्रमा लाग्न सुझाव दिने उनी आफैँ भने गीत गाएर अझै थाकेका छैनन् । उनको नयाँ लोकगीत छिट्टै बजारमा आउँदैछ । जसको शब्द छ, “बग्यो कालीगण्डकी, बल्लबल्ल दियौ प्रभु, नयाँ साथी नयाँ जिन्दगी ।” आदी आदी